Xilliga bilowga Jannada TV7: dalka A ku dhashay xanuun | Apg29
"Haddii Israa'iil ayaa Holocaust ma ku dhacay."
Taxanaha of mucjiso Qarniga diray Jannada TV7.
Eeg barnaamijkii ugu horreeyay ee "A dalka ku dhashay xanuun," iyo sidoo kale soo socda, halka ay sidoo kale ka qayb Minnie.
The Christian Jannada TV7 ay bilowdey in dib u diraya mucjiso Qarniga. Waxaa jira guud ee sideed barnaamijyada cusub ku tilmaamay horumarka ee Israa'iil ka dib markii dalka lagu dhawaaqey in 1948 in dabayaaqadii sannadihii 1960.
Fiiri barnaamijka xiddiga xilliyeed ee ugu horeysay "dalka A ku dhashay xanuun," iyo sidoo kale soo socda, halka ay sidoo kale ka qayb Minnie.
Bishii Abriil 1944, Minnie la qoyskiisa tareen si Auschwitz. Hooyadeed, oo aabbahay iyo adeer u tageen in hal jiho, Minnie iyadii iyo labadeedii Walaalo ah oo kale ah. Waxa ay aheyd markii ugu danbeysay ee Minnie arkay waalidkood.
Markaas ayaa Holocaust ma dhacay
Minnie ayaa sheegay in barnaamijka:
Xirma waa Ruben Agnarsson ka Jannada TV7 iyo Max Federmann ka Fund National Yuhuudda.
Xilli START 23/9: Dhacdada 9: dalka A ku dhashay xanuun
Isniinta. 20:15 channel TV.
Markaas ee Play halkan ku kaydiso.
Eeg taxanaha oo dhan halkan.